काेराेनाकाे असर: आमाले ढुंगा उमालेको नाटक गरेर बच्चालाई चुप लगाइन्! - Deshko News Deshko News काेराेनाकाे असर: आमाले ढुंगा उमालेको नाटक गरेर बच्चालाई चुप लगाइन्! - Deshko News
काेराेनाकाे असर: आमाले ढुंगा उमालेको नाटक गरेर बच्चालाई चुप लगाइन्!
आठ बच्चाहरुकी यी आमाको नाम पेनिना बहाती कित्साओ हो ।
उनले भनिन्, “मेरा बच्चाहरुलाई यो थाहा भइसकेको थियो कि म ढुंगा उमालेर नाटक गरिरहेको छु, तर के गर्नु मसँग यो बाहेक अरु केही उपाय पनि त थिएन ।” केन्यामा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ३९५ जना संक्रमित भएका छन् भने १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पेनिना निरक्षर हुनुका साथै विधवा महिला हुन् । उनी अरुको कपडा धोएर आफ्नो तथा आफ्ना बच्चाहरुको पेट पाल्ने गर्थिन् तर कोरोना संक्रमण फैलिएपछि भने उनको काम ठप्प हुन पुगेकाे छ। बीबीसी